PEACEFUL PA: 2011
Posted by Papa at 8:29 AM
God’s order - ဘုရားသခင် ရဲ့ အစီအစဉ်
ဘုရားသခင်ရဲ့ အစီအစဉ် God’s order
· အာလူးပိုးရဲ့ဥဟာ ခုနှစ်ရက်အကြာမှာ ဥပေါက်ပါတယ်။
· စာငှက်ကလေးတွေဟာ ၁၄ ရက်အကြာမှာ ဥပေါက်ပါတယ်။
(ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က ၁၄နှစ်တခါ အပြောင်းအလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။)
· ကြက်တွေက ၂၁ ရက်မှာ ဥပေါက်ပါတယ်။
· ဘဲတွေက ၂၈ ရက်အကြာမှာ ဥပေါက်ပါတယ်။
· တောဘဲငန်းရိုင်းတွေက ၃၅ ရက်မှာ ဥပေါက်ပါတယ်။
· ကြက်တူရွေးနဲ့ ငှက်ကုလားအုပ်တွေက ၄၂ ရက်အကြာမှာ ဥပေါက်ပါတယ်။
· ခွေးကတော့ ၆၃ ရက် ကိုယ်ဝန်လွယ်ရပါတယ်။
· လူက ရက်ပေါင်း ၂၈၀ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရပါတယ်။ (၄၀x၇၀)
အားလုံးဟာ တပတ်ဆိုတဲ့ ၇ ရက်နဲ့စားရင် ပြတ်ပါတယ်။
လူ့ဘ၀ဟာ ဘုရားသခင်ကိုသာ အားကိုးမယ်ဆိုရင် လှပတဲ့နည်းတမျိုးမျိုးနဲ့ ဘုရားဘုန်းထင်ရှားမှာပါ။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆိုရင်တော့ ဘ၀ဟာ ရှုပ်ရုံ။ ဆုံးရှုံးရုံပါပဲ။ ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသားကို ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဟာ ဘ၀ကို လှလှပပကလေး အောင်အောင်မြင်မြင် လမ်းပြနိုင်ပါတယ်။
ဆင်တကောင်ကို ဖန်းဆင်းတာကိုကြည့်ပါ။ သူ့ရဲ့ ခြေထောက် ၄ ချောင်းလုံးဟာ တဖက်တည်းကိုပဲ ကွေးညွတ်ပါတယ်။ ဘယ်ခြေ ၄ချောင်းသတ္တ၀ါမှ သူ့လိုဖန်ဆင်းထားတာမရှိပါဘူး။ ကိုယ်ထည်ကြီးမားတယ်။ အမာခံခြေ ၄ ချောင်းနဲ့ မြန်မြန်ထနိုင်အောင် ဖန်ဆင်းထားပါတယ်။
မြင်းက ရှေ့ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ အရင်ရပ်ပါတယ်။ နွားက နောက်ခြေ ၂ချောင်းနဲ့ အရင်ထပါတယ်။ ဘုရားရဲ့ ညဏ်တော် လက်ရာတွေပါပဲ။
အသီးတွေ၊ အရွက်တွေ၊ အစေ့အဆံတွေမှာလည်း ဘုရားညဏ်တော်ကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
· ဖရဲသီးမှာ အစင်းကြောင်းတွေဟာ အရေအတွက် တူညီစွာရှိပါတယ်။
· လိမ်မော်သီးမှာ အမွှာ အရေအတွက် တူညီစွာရှိပါတယ်။
· ပြောင်းဖူးမှာ အတန်း အရေအတွက် တူညီစွာရှိပါတယ်။
· ဂျုံနှံတွေမှာ အစေ့ အရေအတွက် တူညီစွာရှိပါတယ်။
· ငှက်ပျောဖီးတိုင်းရဲ့ အောက်ဆုံးအတန်းမှာ ငှက်ပျောသီး အရေအတွက် တူညီစွာရှိပါတယ်။ အတန်းတိုင်းမှာ တလုံးစီလျော့ပါတယ်။ တတန်းနဲ့ တတန်း တလုံးကွာနေတတ်ပါတယ်။
· ဘယ်ရာသီမဆို ပင်လယ်လှိုင်းဟာ ကမ်းခြေကို တမိနစ်မှာ ၂၆ ခါ လာရိုက်ပါတယ်။
· အနှံတွေမှာ တူညီတဲ့ အစေ့ အရေအတွက် တူညီစွာရှိပါတယ်။ သခင်ဘုရားက အဆ ၃၀၊ အဆ ၆၀၊ အဆ ၁၀၀ လို့ အရေအတွက် အတိအကျ ပြောပါတယ်။
ပန်းတွေကို သူ့အချိန်နဲ့သူ ပွင့်စေတာကြောင့်၊ လင်နေးယပ်စ် Linnaeus ဆိုတဲ့ ရုက္ခဗေဒပညာရှင်က မြေအမျိုးအစား၊ ရေဓါတ်၊ အပူချိန်ကိုသိရရင် ပန်းပွင့်ချိန်၊ ပန်းနွမ်းချိန်ကို သူပြောနိုင်တယ်လို့ ဆိုဖူးပါတယ်။
ဘုရားကိုအားကိုးသူရဲ့ ဘ၀ကို မွှေးရနံ့နဲ့အတူ လှပနေဖို့ ဘုရားသခင် စီရင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်စီမံတဲ့ ဘ၀ဟာ အောင်မြင်တယ်။ ဘုရားလက်ထဲအပ်ရင် ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။
_ The Trumpet of Truth
Posted by Papa at 3:22 AM
Labels: သဘာဝ, ဆောင်းပါးတို
BE LITTLE, ..... BUT
There are 55 children in my Christian school in this school year. Most of them are poor and I have to provide them daily food. We eatabag of rice in every two days. This isavery heavy burden for me. We have no Christian curriculum and computer. We do not have evenagood school building. It can be seen clearly that we are so poor.
But, ( It isagreat BUT for me ) the LORD gave meaBible verse to recall yesterday!
"But thou, Beth-lehem Eph-ra-tha, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he came forth unto me that is to be ruler in Israel; " Micah. 5:2
I preached on this Sunday morning service like this. " But thou, little Christian school, Aung Lan, though thou be little among the thousands of Burma, yet out of thee shall he came forth unto me that is to be ruler in Burma. :)
If the LORD will grant me to see some of my students asagreat men and women in this land in the future, I think my burden is worthy to bear happily. And my life is worthy to live!
Posted by Papa at 11:59 PM
Labels: English, ခွန်အားယူစရာ